Blogs: फलफुलको बोटमा लगाउने बोर्डो पेस्ट मिश्रण (१%) बनाउने तरिका!!
फलफुलको बोटमा लगाउने बोर्डो पेस्ट मिश्रण (१%) बनाउने तरिका!!
एक प्रतिशतको बोर्डो मिश्रण तयार गर्न १० ग्राम चुन १ लिटर पानीमा घोलेर बनाउनु पर्दछ। निलोतुथो १० ग्राम, चुन १ लिटर पानीमा घोलेर बनाउनु पर्दछ। निलोतुथो पग्लन समय लाग्ने हुनाले रातभरी पानीमा राखी पग्लन दिनु पर्दछ। प्लाष्टिकको बाल्टिनमा एक लिटर पानीमा २०० ग्राम निलोतुथो र प्लाष्टिकको अर्को बाल्टिनमा एक लिटर पानीमा २०० ग्राम चुना राखेर छुट्टाछुट्टै घोल्नु पर्दछ।
यसरी बेग्ला बेग्लै भाडामा पगालेको निलोतुथो र चुनालाई तेश्रो प्लाष्टिकको बाल्टिनमा मिसाएर घोल तयार गर्नु पर्छ। यसको लागि निलोतुथो र चुनको गोल संगसगै बराबर रुपमा मिसीने गरी खन्याउदै जाने र अर्को व्यक्तिले लठ्ठीले चलाउदै जानु पर्दछ। यसरी तयार भएको घोलमा १८ लिटर पानी थपि २० लिटर बनाउनु पर्दछ। यस्तो मिश्रण तयार गर्दा धातुका भाँडा प्रयोग गर्नु हुदैन।
यसरी मिश्रण बनाई सकेपछि निलोतुथो र चुनको मात्र मिसाए नमिसीएको जाँच्नु पर्दछ। यसको लागि एउटा सफा खिया नलागेको चक्कु वा ब्लेड घोलमा डुबाउने र निकालेर हेर्ने। यदि यसमा खिया लागे जस्तो रङ्ग आएमा पुनः चुन थप्दै चलाउदै जाने र फेरि जाँच्ने । यसरी चक्कु वा ब्लेडमा खिया नआई सफा छ भने मिश्रण तयार भयो भन्ने बझ्नु पर्दछ ।
निलो लिट्मस पेपर डुबाउदा रातो गरेको २४ घण्टा भित्र छरि सक्नु पर्दछ। पानी परेको वा चर्को घाम लागेको बेला वोर्डो मिश्रण छर्नु हुदैन्।
बोर्डो लेप (१०%) बनाउने तरिका
प्लाष्टिकको बाल्टिन (१२ लि)
निलोतुथो (CuSO­­­­­4) धुलो
प्लाष्टिकको बाल्टिनमा ५ लिटर पानी राखेर घोल्ने
दुई छुट्टाछुट्टै भाँडोमा घोलेको मिक्चरलाई तेश्रो भाँडोमा एकै पटक एक नासले मिसाउने
निलोतुथो र चुनाको घोललाई एकै साथ मिसाई सकेपछि आलसको तेल पानि मिलाई घोल्ने।
यसरी तयार गरिसकेपछि सकेसम्म ५-६ घण्टा भित्र वा सोही दिनमा पेष्ट लगाई सक्नुपर्छ अन्यथा घोल विशाक्त हुन्छ।